Indlela yokukhulisa i-orange ekhaya
Abalimi abanolwazi bayazi ukuba kunemvakalelo engenakulinganiswa - xa evela kwimbewu etyalwe nguwe ikhula umthi. Ngoko ke, ukuba unqwenela ukwandisa iziqhamo zakho zaseburrus ekhaya, zilungele ukuba le nto iyinkathazo kwaye akulula kangako njengoko kubonakala ngathi. Namhlanje siza kuthetha ngendlela yokukhulisa i-orange ekhaya.
I-orange kwindlu yityalo efuna ukunyamekela. Kodwa nangomthi onjalo, awuyi kuvelisa iziqhamo ngaphaya kweyesixhenxe kwiminyaka elishumi. Kwaye mhlawumbi ngaphezu koko, awuyi kuvuya nakwixesha lokuvuna. Kodwa nangona kunjalo, ukujonga indlela umthi okhula ngayo ngesandla sakhe kungumnandi ongafaniyo. Ngaphezu koko, umthi we-orange uhle kakhulu, kwaye ngokuqinisekileyo uya kuthatha indawo efanelekayo ngaphakathi kwendlu yakho.
Unokuqalisa inkqubo yokukhulisa i-orange ekhaya emva kokuba udle i-orange elula kakhulu kwaye ilungileyo kwaye uthabathe onke amathambo kuwo. Kufuneka wenze inkomfa encinci ngemingxuma ephantsi, uyizalise ngomhlaba okhethekileyo we-citrus - oku kuthengiswa kuyo nayiphi na ivenkile yeentyatyambo - kunye nobunzulu beesentimitha ezimbini ukulahla onke amathambo athobileyo. Ilizwe kufuneka lihlanjululwe, i-orange ithanda amanzi kakhulu. Ukuze kuphuhliswe ukukhula, isityalo kufuneka senze umoya oqhelekileyo-oko kukuthi, ukuphakama okuphezulu kunye nobushushu. Ukwenza oku, khawula isikhwama se-cellophane kwi-pot. Kuvela inguqu encinci ye-greenhouse, eyenziwa kwimiyezo yegadi yemifuno yokuvuthwa ngokukhawuleza kwemifuno.
Ibhodlela lezithombo lifuna ukufakwa endaweni eqaqambileyo, kodwa ilanga elithe ngqo limele liphephe. Ngokuhlwa, xa ilanga liphuma, kufuneka ususe ipakethi ebhodweni, unike izityalo "ukuphefumula". Ungakulibali ukutyisa ibhodlela ngamanzi kwiqondo lokushisa, ngelixa ukuma amanzi kulungile. Emva kweentsuku eziyi-15-20, iifom zokuqala ziya kuvela. Kucetyiswa ukuba, emva kokuvela kweentlobo, enye iveki ukugcina ukukhula kwazo ukuze kukhethwe unamandla. Izityalo zokutshalisa zifuna malunga nomnyaka, kodwa kunokwenzeka kwaye kusenokwenzeka, ngokukhethekileyo entwasahlobo, ukucoca ibhokhwe kwindinganiso, ukwenzela ukuba ungathinteli ukuphuhliswa kwengcambu. Khumbula, kwinqanaba lokuqala akufanele ucinge nje ngendlela yokukhulisa i-orange, kodwa nendlela ekuchanekileyo ngayo ukutshintshwa.
Njengoko kuchazwe ngentla, i-orange ekhaya isityalo esidinga ukunakekelwa ngononophelo. Fumana isilwanyana sakho indawo apho kukho ukukhanya okukhulu, kodwa akukho lilanga elithe ngqo. Ungasebenzisa kwakhona ukukhanya okongeziweyo. Njengoko umthi ulula ngokubhekiselele ekukhanyeni, kunokwenzeka ukuba amasebe aphendukela kwiwindow aza kuphuhliswa ngakumbi kunabanye. Ukuze ugweme uphuhliso olungalinganiyo, ngamanye amaxesha uphendule isityalo kancane. Akukhuthazwa ukuhambisa i-citrus engabonakaliyo-isityalo asinyamezeli ukutshintsha kwindawo.
Igumbi kufuneka limanzi ngokwaneleyo, njengoko umthi uphenduka kakubi ukutshisa umoya. Kubalulekile ukutshiza isityalo rhoqo okanye ukubeka i-humidifier eduze kwayo. Ukususela ngamaxesha - kwiiveki ezintathu-kufuneka udle. Ngokwenza njalo, kufuneka kukhunjulwe ukuba ukuthambisa isityalo kufuneka kube ngumlambo omile, ukuma, ngexesha lokuhlamba udinga ukugubungela umhlaba, ukuthambisa isithsaba kuphela. Ehlobo nakusentwasahlobo, ukuthambisa kufuneka kube luninzi, kuba nje unako ukukhulisa i-orange ekhaya, kuba ungayikhohlwa kabini ngemini, kusasa nangokuhlwa, ukuhambisa amanzi kwisityalo.
Ukuze isityalo siqale ukuvelisa iziqhamo ngokukhawuleza, kufuneka isondlo esikhethekileyo, esinokuthengwa kwiivenkile ezizodwa. Iifomfri ziphinda zithuthukise i-oranges, esoloko isinika iziqhamo ezibuhlungu kwigumbi. Nangona kunjalo, kunzima kakhulu ukufumana iziqhamo ezivela emthini engadini, nangona isiqhamo siphumela ngexesha lokuzimela. Inyaniso kukuba ukusila kwi sityalo kwenzeka ngexesha lokushisa kwe-+15 degrees, enzima kakhulu ukuphumeza ekhaya. Ikhetho kuphela - i-loggia eneglasi kunye ne-insulated, apho ungagcina khona umthi ukusuka ekwindla ukusa. Kodwa nangona kunjalo, ukuze kube nesityalo, isityalo kufuneka sityalwe. Yenza ngokwakho, ngaphandle kokuba nakho, kunzima kakhulu, ngoko kungcono ukubuyela kwiingcali. Kule njongo, ungasebenzisa amaqabunga emon, i-orange okanye i-grapefruit kwisiqhamo esithwala iziqhamo. Olu kuhamba luya kuphucula umgangatho wezityalo.
Kubalulekile ukubonakala kweziqhamo kukubunjwa kwesithsaba sesityalo. Ukuba awuyikunceda umthi kwaye unqume amagatsha, awuyi kunika amagatsha angaphezulu kweyesibini, kwaye izithelo zivuthwe kuphela kumasebe omyalelo wesine okanye wesihlanu. Ngaphandle kokucoca, i-orange ikhula, kwaye ayikho ububanzi, okwenza kube nzima ukuvelisa. Sika izicwangciso zamasebe, ushiye iiinney ezininzi kwisebe eliqhekekileyo. Kule, amasebe omyalelo wesibini aya kubonakala, okufuneka ahlanjwe ngesicwangciso esifanayo. Emva koko kukho i-branching elandelayo, ekwacetywa kwakhona, kwaye ngoko de kubekho ukuvela kwamasebe wesihlanu. Isithsaba esakhiweyo asikho nje sibukeka sihle kakhulu, kodwa sinokuthi sinokukunceda ukuba udle ii-oranges zakho emva kwexeshana, kwaye kubonakala ngathi akukudala nje uceba ukukhula i-orange ekhaya, kodwa ngoku uphethe iziqhamo zayo.
Ngoku uyazi ukuba unako ukukhulisa i-orange ekhaya uze uhlaziye indawo yakho kwindawo. Ukulima kweziqhamo zase-citrus ekhaya liyingxaki eyinkxalabo, kodwa inombulelo kakhulu: akukho nto inomnandi ngaphezu kokuqokelela isivuno esikulo.
I-Eucalyptus - plant plant
Izixhobo zokunyamekela i-poinsettia
Indlu yepandanus yeNdlu
Izityalo ezingaphandle: i-peperomy
Izityalo ezingaphandle: i-pedalanthus
Imbali ye-Orchid: njani ukunyamekela?
Ukukhawuleza ukuphilisa umphimbo?
Ukucoceka okupheleleyo kwindlu yokuhlambela - amandla wamanzi
Ukulungiselela ama-thermogenic: ukubunjwa nokusetyenziswa kwamalungiselelo
Unyango lweempahla zesikhonkwane
Iimpawu zokugqwesa ezifanelekileyo kwiikhaya - zokupheka kuzo zonke iintlobo zesikhumba
I-Ciabatta kunye namakhambi kunye negalikhi
Isibheno se-cottage cheese kunye ne-avocado
Umzimba okhuselekileyo kunye nempilo ephezulu
Shish kebab kwi-pike perch
Indlela yokuba ngumfazi ophelileyo
Kwiwebhu kwakukho umfanekiso we-Alla Pugacheva ngaphandle kokwenza
Isobho se karoti